Ukuphupha iflegi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iflegi sisiqwenga selaphu esisixande, esisoloko sinikezelwa ngabalinganiswa, iisimboli okanye imifanekiso. Ilaphu linokuba yi-monochrome okanye umbala, njengabalinganiswa okanye iipateni ezibonisiweyo kuyo. Njengomgaqo jikelele, iflegi ijinga esibondeni okanye, ukuyiphatha, kwipali yomthi okanye ialuminium. Imibutho emininzi, imikhosi, kunye neecawe zineempawu zazo zeflegi, kwaye (federal) ithi, imimandla kunye nezixeko zineeflegi zazo. Kubomi bethu bemihla ngemihla, sihlala sidibana neebhanile ezinopapasho lwentengiso phambi kwevenkile okanye kwenye okanye kwenye igadi yemifuno.
Ngaba uphuphe iflegi? Olu phawu lwephupha lufuna ukukuxelela ntoni? Cinga kwakhona ngephupha lakho kwaye unike ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha. Ibinjani iflegi? Ngaba ibingumbala othile? Ngaba yonakele? Ngaba ubungcangcazelisa umoya okanye ubungumntu ophethe umgangatho? Yonke le mibuzo kufuneka ikuncede utolike iphupha lakho.
1 Uphawu lwephupha «iflegi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iflegi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iflegi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iflegi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, iflegi ephupheni luphawu lwayo izicwangciso zobomi obutsha kunye nempumelelo yobungcali. Ukuphupha kuya kubeka iinjongo ezintsha ebomini. Ukuba umphuphi ubona iflegi ngelixa elele, evuthela umoya, oku kubonisa ukubhiyozela okuzayo ebomini bokuvuka.
Ukubonakala kweflegi xa ibhabha ephupheni kubonisa ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha. inhlanhla Nomsindo. Ukuba iphupha liphethe iflegi, uphawu lwephupha "iflegi" lithetha impembelelo enkulu kuye el mundo yomlindo. Ukuba iflegi yonakele ephupheni okanye ixhonywe kwisiqingatha semasti, oku kukubonisa iinjongo ezilahlekileyo, ukwenzakala okanye ukusetyenziswa gwenxa kunye neemvakalelo ezihluphekileyo. Ukuphoxeka. Ukubona komqondiso wephupha "iflegi" kumngcelele kubonisa intlungu.
Iiflegi ezininzi ezindlwini ephupheni zingabizwa. imidlalo yamandla ezopolitiko okanye ungatolika umthetho oqinileyo worhulumente welizwe. Ukujikeleza kweflegi ephupheni kukuthi, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, umqondiso wephupha lokuba amaxesha amnandi eza kuye kungekudala.
Umbala okanye imbonakalo yeflegi ephupheni ikwabalulekile kutoliko jikelele lwesimboli yephupha. Ukuba iphupha liphethe iflegi yesizwe ephupheni lakho, uya kuyenzela ilizwe lakho inkonzo kwilizwe eliphaphileyo kwaye ubonakalise ekuhleni ukuthanda izwe lakho.
Iflegi emnyama ephupheni imele iintlungu okanye enye Ukufa. Kodwa ekutolikeni amaphupha inokusetyenziswa njengophawu lwe ubutshaba itolikwe. Iflegi ebomvu ephupheni izisa amandla kunye namandla ephupheni, kodwa ngamanye amaxesha nentlekele.
Ukuba iphupha libona iflegi enentengiso (yentengiso) motif ephupheni, uphawu lwephupha lunokubonisa umnqweno wakho wobunini. Nangona kunjalo, iiflegi eziyilwe ngokukodwa ziluphawu lweetalente ezizodwa nezizodwa okanye ulwazi lwamaphupha.
Ukujiwuzisa okanye ukuwangawangisa iflegi kunokuqondwa njengomfanekiso wephupha njengesilumkiso sokukhathalela ngakumbi abanye kwaye ungagcini nje ukubeka iliso kwintlalontle yakho.
Uphawu lwephupha «iflegi» - ukutolikwa kwengqondo
Iflegi ephupheni ifanekisela izimvo zomntu kuhlalutyo lwengqondo ngephupha, Lindele y Efanelekileyo yokuphupha. Kwakhona, uphawu lwephupha luphawu lomdlandla, ukucinga ngokudibeneyo kunye nemibono, kunye nomqondiso wamaphupha wokusebenzisa yonke imikhosi yomcimbi okanye umntu.
Ukuba umbono wophawu lwephupha uyathandeka ephupheni, iflegi ephupheni inokuchazwa njengendawo ekubhekiswa kuyo ukuziva, ukucinga nokwenza ngokuthanda. Ukuthotywa kweflegi ephupheni kubonisa iphupha lakhe ukuzisola uziva ngesiganeko esidlulileyo.
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, iflegi ephupheni ibuza umphuphi ophambili ukuba azise iingcinga zakhe zangaphakathi ngokuhambelana nezenzo zakhe. Ukongeza, uphawu lwephupha "iflegi" inokuba ngumfanekiso wephupha lendawo yokuhlangana yabantu abanexabiso kunye neenjongo ezifanayo okanye imigaqo ephelelwe lixesha kunye Iinkolelo kuba.
Kwakhona, iflegi ephupheni inamandla okomfuziselo ekutolikeni ngengqondo iphupha elo. Unokuba ngu amandla okudibanisa itolikwe. Kubonwa njengabasebenzi abanelaphu eliqhwethayo, oku kuguqulela ukutolikwa kwephupha njengentonga yelungu lobudoda kunye nezinto zoomama nababhinqileyo. Ukuntywizisa kwiflegi kutolikwa njengokuhlanganiswa kwezi zinto zimbini.
Uphawu lwephupha «iflegi» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha "iflegi" kukutolikwa kwamaphupha okomoya. Umqondiso woloyiso.